A Than Phann Thu by vXpress - Issuu
ဂျူး ..... Aသံဖမ်းသူ ....................တကယ်လို.သာခင်ဗျားကိုယ်ခန္ဒာရဲ.AာရုံငါပါးးAနက်ကတစ်ခုခုကိုမလွဲမေ သွဆုံးရှုံးရတော.မယ်ဆိုရင်ဘယ်Aာရုံကိုဆုံးရှုံးဖို.ခင်ဗျားရွေးချယ်မလဲ......... မမျှော်လင်.သောသူ.မေးခွန်းကြောင်.ကျွန်မနည်းနည်းကြောင်သွားပါသည်။ ကျွန်မ......ဟုတ်လား၊ ကျွန်မရွေးရမှာလား......... ....................ဟုတ်တယ်၊ခင်ဗျားရွေးစမ်းပါ၊ဘယ်Aာရုံကိုဆုံးရှုံးရတာခင်ဗျားAတွက်A သက်သာဆုံးဖြစ်မလဲ၊ နစ်နာမှုAနည်းဆုံးဖြစ်မလဲ........... မျက်စိကွယ်ရခြင်း၊ နားကန်းရခြင်း၊ နှာခေါင်းAနံ.ဆုံးရှုံးရခြင်း၊ လျှာ၏Aရသာသိနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးခြင်း၊ ထိတွေ.မှု.AပူAေAး၏Aရသာကိုသိနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးခြင်း။ .............တစ်ခုမှတော.မကောင်းဘူး.................. သူခါးသီးစွာပြုံးသည်။ ......သေချာတာပေါ.ဗျာ.................. ..........ကျွန်မထင်မြင်ချက်ကိုပြောရရင်တော.နှာခေါင်းရဲ.Aနံ.AာရုံဆုံးရှုံးရတာကAသက် သာဆုံးဖြစ်လိမ်.မယ်ထင်တယ်၊ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော.ကျွန်မတို.လူသားတွေကနှာခေါင်းနဲ .သိပ်Aလုပ်မလုပ်ကြဘူးမဟုတ်လား........................ ...................ခင်ဗျားAသက်မရှုပဲနေနိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ. ကျွန်မရယ်မိသည်။ ....................ဒီလိုလေကျွန်မပြောချင်တာကကျွန်မတို.Aတွက်နှာခေါင်းကပေးတဲ.Aနံ. Aာရုံဟာသိပ်Aရေးမကြီးဘူး.......................... ဒူးရင်းသီး၏Aနံ.ကိုမရ၊ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေAာက်ဆိုဒ်၏Aနံ.ကိုမရ၊ ပိုတောင်ကောင်းသေးသည်။ စံပယ်ပန်း၏Aနံ.ကိုမရ၊
Aင်း.....ဒါတော.နည်းနည်းထိခိုက်သောဆုံးရှုံးမှု.ဖြစ်သည်။ Aငွေ.တထောင်းထောင်းထနေမည်.ကော်ဖီ၏ရနံ.ကိုမရ၊ ကိစ္စမရှိပါ။ ...................ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို.Aတွက်Aနံ.ဟာAရေးမကြီးဘူး၊ ခင်ဗျားမျက်စိတွေသာကောင်းနေခဲ.မယ်ဆိုရင်ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုခင်ဗျားကြည်.နိုင်တယ်၊ ကောင်းကင်ကြီးကိုခင်ဗျားကြည်.နိုင်တယ်၊ တိမ်တွေဘယ်လိုရွေ.နေတယ်၊ ကြယ်တွေဘယ်လိုတောက်ပနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားမြင်ရမယ်၊ နှင်းဆီပန်းခင်းကြီးကိုခင်ဗျားမြင်ရမယ်၊ ဘယ်လောက်များAရသာရှိလိုက်မလဲ၊ နှာခေါင်းကပေးတဲ.ရသထက်မျက်စိကပေးတဲ.ရသကAဆပေါင်းများစွာမြိန်ရှက်ပါတယ်ဗျာ .....မဟုတ်ဘူးလား............................ ဟုတ်ပါသည်။ Aဆိုးရွားဆုံးဆုံးရှုံးမှုကတော.မျက်စိ၏Aမြင်Aာရုံဆုံးရှုံးခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ်.မည်။ ..................တကယ်လို.သာကျွန်တော်.မှာရွေးချယ်ခွင်.ရှိခဲ.မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်.နှာခေါ င်းရဲ.Aနံ.Aာာရုံကိုပဲဆုံးရှုံးပါရစေလို.တောင်းဆိုမိမှာပဲ........................ ကျွန်မသူ.ကိုငေးကြည်.မိသည်။ ..............Aခုတော.လူ.ဘ၀ရဲ.ရွေးချယ်ခွင်.နည်းနည်းကလေးထဲမှာAဲဒီကိစ္စမပါခဲ.ဘူးဗျာ ...... ကြေကွဲနာကြည်းဟန်ဖြင်.သူရေရွတ်သည်။ကြောင်ကြောင်ကြီးကန်းနေသောသူ.မျက်လုံးများသည်ကျွန်မရှိရာကို မှန်းဆကြည်.နေသည်။ ကျွန်မစိတ်မသက်မသာဖြင်.ကိုယ်ခန္ဒာကိုAနည်းငယ်ရွေ.လိုက်မိ၏။ ............မျက်စိကွယ်တာဟာAရာရာကိုဆုံရှုံးသွားတာတော.မဟုတ်ပါဘူး................. ................ဒါပေမယ်.AရေးကြီးဆုံးAရာတွေတော.ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီ၊ Uပမာငွေ၊ Aလုပ်၊ AဲဒါတွေAခုကျွန်တော.မိန်းမကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရပြီ........................ ...........................ဒါလက်လွှဲပြောင်းတာပဲ..............................
..................ဒါဆုံးရှုံးတာပဲ၊ကျွန်တော.ပိုင်ဆိုင်မှု.၊ကျွန်တော.နယ်ပယ်ကနေကျွန်တော်ဖ ယ်ပေးလိုက်ရတာပဲ........ ကျွန်မတို.တခဏငြိမ်သက်သွားကြသည်။ လမ်းမဆီမှာကားကြီးကြီးတစ်စီးပြင်းထန်စွာဖြတ်သွားသည်။ သူAနည်းငယ်တုန်သွား၏။ .........ငွေတွေကိုကျွန်တော်မရေရတော.ဘူး၊ဆေးဘူးမျိုးစုံကိုကျွန်တော်.လက်နဲ.မထိရေ တာ.ဘူး၊ မော်တော်ကားကိုကျွန်တော်မမောင်းရတော.ဘူး၊ Aားလုံးဟာကျွန်တော်.လက်ထဲကနေလွတ်ထွက်သွားပြီ၊ Aဆိုးဆုံးကစာမဖတ်ရတာပဲဗျာ..... စာဖတ်ခြင်း၏Aရသာကိုဆုံးရှုံးရမှာကိုတော.ကျွန်မတော်တော်ကြောက်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားကမျုက်မမြင်တွေAတွက်တော.တိပ်ခွေစာAုပ်တွေAလျှံပယ်ရှိသည်မို.မျက်စိဖြင်. ဖတ်လို.မရသောစာကိုနားဖြင်.ဖတ်လို.ရသည်။ ကျွန်မတို.Aတွက်တော.Aဲဒီလောက်မပြည်.စုံသေးပါ။ .......ဒါပေမယ်.ရှင်မျက်စိကွယ်လိုက်တဲ.Aတွက်ပိုကောင်းလာတာတစ်ခုရှိတယ်မဟုတ်လား၊ ရှင်ဟာAသံတွေကိုသူများတကာတွေထက်ပိုကြားလာနိုင်တယ်ဆို............ ကျွန်မသူ.ဆီရောက်လာရခြင်းသည်Aသံကိစ္စဖြစ်သည်။ သူသည်AသံများကိုAတိုးတိတ်ဆုံးAသံ၊AဝေးကွာဆုံးသောAသံAထိကြားရသည်ဟုနံ မည်ကြီးသည်။သူ၏Aသံဆိုင်ရာAရည်Aချင်းသည်Aချို.သောရဲAမှုကိစ္စများကိုAလွယ် တကူပြေလည်စေသည်ဟုကြားဖူးပါသည်။ ...........ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ်.ဒါဟာဘယ်လောက်များAကျိုးကျေးဇူးရှိလို.လဲ၊ AဲဒီAသံတွေကိုကျွန်တော်ကြားဖို.မလိုAပ်ဘူးလေ၊ တချို.Aသံတွေဆိုရင်မကြားAပ်တဲ.မကြားကောင်းတဲ.Aသံတွေလေ၊ ဒါတွေကြားရတော.ကျွန်တော်.ဘ၀ကဘာများAရသာရှိမှာမို.လဲ.................... ...............ဒါပေမဲ.မှုခင်းတွေကိုဖြေရှင်းတဲ.နေရာမှာAဲဒီရှင်ကြားတဲ.Aသံတွေကတော်ေ တာ်Aထောက်Aကူပေးခဲ.တာပဲ၊တစ်နည်းAားဖြင်.ရှင်ဟာလူ.လောကရဲ.Aကျိုးကိုဆော င်ရွက်
ပေးနေတာပဲ၊ ဒါဟာရှင်.Aတွက်ဂုဏ်ယူရမှာပေါ........ သူခေါင်းမာစွာပြုံးသည်။ ...........ကျွန်တော်ဂုဏ်မယူချင်ဘူးဗျ၊ ကျွန်တော်ကပျော်ရွှင်ချင်တာ၊ Aရသာရှိချင်တာ........ ......သူများမကြားနိုင်တဲ.AဝေးကြီးကAသံတွေကိုကြားရတာAဲဒါAရသာရှိမှာပါ........ တချို.Aသံတွေကရက်စက်တယ်၊ကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ေAာ.နှလုံးနာစရာကောင်း တယ်၊တချို.Aသံတွေကိုခင်ဗျားကြားရရင်လောကကြီးမှာAသက်ရှင်နေထိုင်ဖို.တောင် ကြောက်ရွံ.လာလိမ်.မယ်....... ..................ဘယ်လိုAသံမျိုးတွေလဲ.............................. ထို.နောက်ချက်ချင်းပင်ကျွ န်မစိတ်ပြောင်းသွား၏။ Aို...ဟင်.Aင်း၊ မပြောပါနဲ.၊ ကျွန်မမသိချင်ပါဘူး..................... သူသဘောကျစွာပြုံးသည်။ .....................ဟုတ်တယ်၊ခင်ဗျားသိချင်မှာမဟုတ်ဘူး၊တစ်ခါတစ်လေကျတော.မသိရခြ င်းရဲ.AရသာဟာလိုAပ်တယ်၊ သိရခြင်းရဲ.Aရသာကသိပ်နာကျင်ဆိုးရွားလွန်းတဲ.Aခါမျိုးမှာပေါ. ...........ဒါနဲ.ရှင်ကလောလောဆည်ပစ္စုပ္ပန်ကAသံတွေကိုပဲကြားရတာလား၊ ဟိုAတိတ်ကAသံတွေကိုရောကြားရလား၊ Uပမာသီပေါမင်းရဲ.Aသံတို.ဘာတို. သူခွက်ထိုးခွက်လန်ရယ်ပါသည်။ ကျွန်မAနည်းငယ်ကသိကေAာက်ဖြစ်သွား၏။ ..........ဆောရီးဗျာ၊ခင်ဗျားကိုလှောင်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ခင်ဗျားမေးခွန်းကတိုက်ရိုက်ကျလွန်း လို.ပါ၊ ကျွန်တော်ကြားရတဲ.AသံတွေကAများကြီးပဲဗျ၊ ဒါပေမဲ.Aတိတ်ကAသံ၊ ပစ္စုပ္ပန်ကAသံရယ်လို.ကျွန်တော်မခွဲတတ်ဘူး၊ ကျွန်တော်.Aတွက်ကAသံဟာAသံပဲ၊ မိန်းမသံ၊ ယောင်္ကျားသံ၊ လူကြီးသံ၊ ကလေးသံ၊ ငိုသံရယ်သံ၊ ဒေါသသံ၊
နာကျင်လို.ေAာ်တဲ.Aသံ......ဒါမျိုးတွေပဲကွဲပြားတယ်.................. ဟုတ်ပါရဲ.။ သီပေါမင်းရဲ.Aသံကိုကြားရရင်တောင်မှဒါသီပေါမင်း၏Aသံဟုဘယ်.နှယ်လုပ်သိပါ.မလဲ။ .............ရှင်ကြားရတဲ.Aသံတွေဟာလက်ရှိကျွန်မတို.ရဲ.သမိုင်းတွေ၊ရာဇ၀င်တွေကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်လို.ထင်သလား.................. သူ၏Aရောင်Aဆင်းမဲ.သောမျက်လုံးတို.သည် ကျွန်မထံမှလွှဲကာတစ်ဖက်နံရံဆီသို.လှည်.သွား၏။ ..............မပြောင်းပါဘူး၊ဘာဖြစ်လို.ပြောင်းရမလဲ၊သမိုင်းတစ်ခုကိုပြောင်းပစ်ဖို.ဆိုတာ သက်သေAထောက်AထားတွေAများကြီးလိုတယ်လေ၊ကျွန်တော်ကြားရတဲ.Aသံတွေ ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ.မှAထောက်Aထားမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော.ကျွန်တော်က ကျွန်တော်ကြားရတဲ.Aသံတွေကိုနဂိုမူရင်းAတိုင်းထုတ်ပေးနိုင်တာမှမဟုတ်ဘဲ၊ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို.လူသားတွေရဲ.AကြားAာရုံဟာတိပ်ပ်ရီကော်ဒါလောက်မှတန်ဖိုးမ ရှိပါဘူး၊တိပ်ပ်ရီကော်ဒါကတော.Aသံတွေကိုသိမ်းထားနိုင်တဲ.Aပြင်သူ.နဂိုမူရင်းAသံAဖြ စ်ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တာဗျ၊ ဘယ်လောက်ဆန်းကြယ်လိုက်သလဲ၊ ကျွန်တော်ကတော.ကျွန်တော်ကြားရတဲ.Aသံတွေကိုသိမ်းရုံပဲသိမ်းထားနိုင်တာ၊ ပြန်ထုတ်မပေးနိုင်ဘူးလေ................. ................တလောတုန်းကကျွန်မတို.သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောတယ်၊ Aခုသိပ္ပံပညာဟာAံ.ခန်းတိုးတက်နေတာမို.ကုန်လွန်ပြီးခဲ.တဲ.နှစ်ပေါင်းများစွာကAသံေ တွကိုဖမ်းယူလို.ရတော.မယ်တဲ.၊ ကြိုးစားနေတယ်လို.ကြားတယ်၊ သူတို.Aဓိကကြိုးစားနေတာကဗုဒ္ဒရဲ.Aသံကိုပြန်ကြားလာနိုင်ဖို.ပဲ၊ေAာင်မြင်နိုင်မယ်လို.ရှင်ထင်လား.................... သူပြုံးနေသည်။ .............ကျွန်တော်တို.ငယ်ငယ်ကရူပဗေဒဘာသာမှာစွမ်းAင်ရဲ.နိယာမလားသင်ခဲ.ရတာ တစ်ခုရှိတယ်လေ၊ စွမ်းAင်ဆိုတာကိုဖန်တီးယူလို.မရ၊ ဖျက်ဆီးပစ်လို.လဲမရ၊ စွမ်းAင်ဟာစကြ၀ဠာကြီးထဲကနေပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို.မရှိဘူးမဟုတ်လား၊ Aသံဆိုတာစွမ်းAင်တစ်ခုပဲ၊ လှိုင်းတွေနဲ.ဖွဲ.စည်းထားတဲ.စွမ်းAင်တစ်မျိုးပဲ.........
..........Aခုနည်းပညာတွေAရလောလောလတ်လတ်ပစ္စုပ္ပန်ကရှိနေတဲ.Aသံတွေ၊ Aရုပ်တွေ၊ Aလင်းတွေကိုတော. ဆက်တယ်လိုက်ဂြိုဟ်တုတွေနဲ.ဖမ်းယူလို.ရနေပြီ၊ Aတိတ်ကAသံကိုဖမ်းယူနိုင်ဖို.ပဲကျန်တော.တာ................. ဒါပေါ.၊မိုင်ပေါင်းထောင်နဲ.သောင်းနဲ.ချီပြီးဝေးကွာတဲ.Aရပ်ကAသံတွေကိုကျွန်တော်တို.A ရင်းAတိုင်းကြားနေရ ပြီပဲ၊သိပ်မကြာတော.ပါဘူး၊Aတိတ်ကAသံတွေကို Aရင်းAတိုင်းပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တော.မှာပဲ..ကျွန်မAကြားချင်ဆုံးAသံကဗုဒ္ဒရဲ.Aသံတော် ပဲ.... Aကယ်၍်သာ Aတိတ်ဆီကကုန်လွန်ခဲ.ပြီးသောAသံများကိုဂြိုဟ်တုဖြင်.ဖမ်းယူထုတ်လွှင်.ပေးနိုင်မည်ဆို ပါကကမ္ဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မည်နည်း။ တိုက်ခိုက်မှုတွေပျောက်ကယ်ွသွားနိုင်သလား။ ပဋိပက္ခတွေနည်းမသွားတဲ.Aပြင်ပို၍်ပင်များလာနိုင်ပါသည်။ Aတိတ်ကAသံများကိုကြားရခြင်းသည်ကိုယ်သိလိုက်ရသည်.Aရာတွေကိုသိလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။တစ်ခါတစ်ခါမသိပဲနေရခြင်းကပိုငြိမ်းချမ်းနိုင်မည်ထင်၏။ဗုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားက ဟောကြားခဲ.သည်မဟုတ်လား။ဇာတိသ၁ရUာဏ်ဟူသည်.Aတိတ်ဘ၀ မှဖြစ်စU်များကိုမှတ်မိခြင်းUာဏ်သည်သာမန်လူသားတွေ၏ခံနိုင်ရည်မှကျော်လွန်သော Uာဏ်ဖြစ်သည်။ Aတိတ်ဘ၀ကနာကျင်မှု၊ခံစားမှု၊Aတွေ.AကြုံAဖြစ်Aပျက်များသာလူတွေသိနိုင်မည်ဆို လျှင်AငြိုးAတေးတို.သည်လည်းAဆုံးမရှိတော.နိုင်။ ဝေဒနာနှင်.ချောက်ချားမှုဟူသည်လည်း Aဆုံးမရှိတော.နိုင်။ သဘာဝသည်လူသားAားလိုAပ်သမျှကိုသာပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ လိုသည်ထက်ပိုသွားလျှင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင်.ကြုံတွေ.ရနိုင်သည်။ Aတိတ်ကAကြောင်းတွေကိုAသာထား၊ ယခုပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာကိုပဲ ကျွန်မတို.သည်ကျွန်မတို.ကိုUီးတည်ပြီး ပြောသောAသံများကိုသာကြားဖို.သင်.တော်သည်။ .....ဒေါ်ခင်လှဝေနောက်လဂျာမနီကိုသွားရမယ်လို.ကြားတယ်၊ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ၊ ကျွန်တော်တို.လုပ်ငန်းခွင်Aတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ.ပညာရှင်တကယ်လိုAပ်တာပါ၊ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း.........
ကြားလို.ကောင်းေAာင်ပြောသောစကားကိုကြားရသည်.Aခါကျွန်မတို.ကြည်နူးရသည်။ Aကယ်၍်ကျွန်မတို.မကြားေAာင်ပြောသောစကားတွေကိုသာကျွန်မတို.မတော်တဆကြား ခဲ.မိသော်....။ လူ.ဘ၀မှာကြည်နူးစရာဟူ၍ရှိနိုင်တော.မည်မထင်။ ........ဒီကောင်မကနိုင်ငံခြားကိုသွားရမယ်တဲ.၊ ဒီကောင်မမှာဘာAရည်Aချင်းရှိလို.လဲ၊ သူ.ကိုဘာဖြစ်လို.ရွေးခံရသလဲ၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ.ရလာမယ်ထင်လဲ၊ ဟား...ဟား..ဒီမယ်...မင်းကိုငါပြောမယ်........ ထိုသူကွယ်ရာမှာဆက်လက်ပြောဆိုနေသောစကားများကိုဒေါ်ခင်လှဝေဆိုသူကြားခဲ.ပါက နောက်တစ်နေ.ရုံးတက်ချိန်တွင်ထိုသူAားမျက်နှာချင်းတောင်မဆိုင်ချင်လောက်ေAာင်ေAာ်ဂလီဆန်သွားဖွယ်ရာရှိသည်။ ယခုတော.သူတို.ကျွန်မတို.တွေAခင်မင်မပျက်ကြ။ မကြားသင်.သောစကားများကိုမကြားကြဘဲကိုး။ ဟန်ဆောင်ပြုံးတွေ၊ သံတမန်စကားတွေကြောင်.ကမ္ဘာကြီးမှာပြေပြစ်ချောမွေ.နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ..........ဒါနဲ.ခင်ဗျားလာရင်းကိစ္စကိုမပြောရသေးဘူးနော်................. ...............ဟုတ်ကဲ.၊........... ........လာတုန်းကတော.ရှင်.ကိုပျောက်ဆုံးသွားတဲ.AသံတွေAကြောင်းမေးကြည်.ချင်လို. ပါ၊ မမေးတာကကောင်းမယ်လို.ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်.......... .....ပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို.ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်သိလဲ......... ................မကြားရတော.ဘူးဆိုရင်ပျောက်ဆုံးသွားလို.ပဲမဟုတ်လား............ ..........ဘယ်ဟုတ်မလဲ၊ တချို.ကစကားမပြောတော.တာပဲ.............. ................ထားလိုက်ပါတော.လေ၊ ကျွန်မမသိချင်တော.ပါဘူး၊ ရှင်ပြောတာမှန်ပါတယ်၊ တချို.Aသံတွေဟာမကြားရမသိရရင်ကျွန်မတို.Aတွက်ပိုကောင်းမှာပါ..................... ထို.နောက်သူသည်ရုတ်တရက်တစ်ခုခုကိုAာရုံစူးစိုက်နားထောင်လိုက်သလိုAမူAရာပြော င်းလဲသွား၏။ကျွန်မ Aားနာသွားသည်၊ကျွန်မနှင်.ပြောနေရသည်.
Aတွက်သူ၏AကြားAာရုံဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေတော်တော်လျော.ပါးကုန်ရောပေါ.။ ကျွန်မသူ.ကိုAနှောင်.Aယှက်မပေးချင်သဖြင်.စကားမဟဘဲ Aသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှူဘဲငြိမ်သက်နေလိုက်သည်။ကိုယ်ခန္ဓာနှင်.Uီးခေါင်းကိုမရွေ.လျားဘဲမျက်လုံးသာဝေ.လျက်Aခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုAကဲခတ်ကြည်.မိ၏။ မျက်မမြင်တစ်ယောက်Aနေဖြင်.ဆိုလျှင်လိုAပ်သည်ထက်ပိုနေသည်.ခမ်းနားမှုများရှိသည် ။ ခန်းဆီး၊ Aခန်းထောင်.ကစားပွဲဝိုင်းမြင်.မြင်.သေးသေးလေးပေါ်ကပန်းစိုက်Aိုး......။ ပန်းစိုက်Aိုးထဲမှ လှပသောနှင်းဆီနီများ။ ဘုရားစင်ကိုမတွေ.ရ၊ Aပေါ်ထပ်ထပ်ခိုးပေါ်မှာများရှိမလားမသိပါ။ မျက်မမြင်တစ်ယောက်နှင်.သိပ်မသက်ဆိုင်လှသောရုပ်မြင်သံကြားပြစက်နှင်.ဗီဒီယိုပြစက်။ Aင်းလေ.....သူ.မှာAိမ်ထောင်ရှိသည်။ သားသမီးလည်းရှိချင်ရှိမည်။ သူတို.တွေကြည်.ကြမှာပေါ.။ ကျွန်မရောက်ခါစကသူ.ဇနီးကိုတွေ.ရသည်။ သည်ကနေ.ဈေးပိတ်ရက်ဖြစ်သဖြင်.ဆိုင်မထွက်ရဟုသိရပါသည်။ သူ.ဇနီးကခပ်ချောချောဖြစ်သည်။ မျက်မမြင်တစ်ယောက်၏ဇနီးကချောမောနေခြင်းမှာသာမန်Aားဖြင်.ဆိုလျှင်စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်သော်လည်းသူ.Aတွက်တော.ကိစ္စမရှိဘူးထင်သည်။သူ၏Aစွမ်းထက်လှသောAကြား Aာရုံသည်မဖြစ်သင်. သောကိစ္စတစ်ခုဖြစ်မလာစေရန်ကောင်းကောင်းကာဆီးထားနိုင်ပေလိမ်.မည်။ သူနှင်.ပတ်သက်သည်.လူများAတွက်ဆိတ်ကွယ်ရာဟူသည်မရှိသလောက်ဖြစ်လိမ်.မည်။ သူ.ထံမှညည်းညူသံလိုလိုမသဲမကွဲကြားလိုက်ရ၏။ ကျွန်မသူ.ကိုလှည်.ကြည်.လိုက်သည်.Aခါသူ.နဖူးမှာချွေးပြန်နေသည်။ ထိုချွေးကိုသူလက်ဖ၀ါးဖြင်.Aသာသုတ်လေသည်။ ....ကျွန်တော်.ဘ၀ဟာမျက်စိမြင်တဲ.Aချိန်တုန်းကလုံခြုံတယ်ဗျ၊ Aခုမလုံခြုံတော.ဘူး...... သူ.Aသံမှာစိုးရိမ်ကြောင်.ကြမှု.ကိုကျွန်မခံစားလို.ရနေသည်။ .....ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေရဲ.Aကြောင်းကိုသိနေရတာနောက်ကျောမလုံဘူး၊ တစ်ချိန်ချိန်မှာနှုတ်ပိတ်ခံရနိုင်တယ်ဗျာ၊ စောစောတုန်းကတစ်နေရာရာမှာလူတွေကျွန်တော်.Aကြောင်းဆေွးနွေးနေကြတယ်........
.ကျွန်မကျောထဲစိမ်.ခနဲေAးစက်သွားသည်။ ..........သူတို.Aတွက်ကျွန်တော်ဟာAန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို.ထင်နေတယ်.............. ဘုရားရေ....။ ဟုတ်တာပေါ.၊မကောင်းမှုပြုလုပ်သူများAတွက်သူသည်Aန္တရာယ်ကြီးမားလှသောAနှော င်.Aယှက်ကြီး တစ်ခုဖြစ်နေမှာပဲ။ ........Aဲဒီတော.ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ........ .....ရှင်းပြပြီးတောင်းပန်ရမှာပေါ.ဗျာ၊ ကျွန်တော်ဟာတိပ်(ပ်)ရီကော်ဒါတစ်လုံးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ........... သူတို.လက်ခံကြပါ.မလား။ တိပ်(ပ်)ရီကော်ဒါမဟုတ်ပေမယ်.ပြန်ပြောနိုင်တဲ.ပါးစပ်ပိုင်ရှင်လေ။ .............ထွက်ပြေးရင်ကော............... .......ဘာထူးမှာလဲဗျ၊ သိနေတဲ.လူတစ်ယောက်Aတွက်လတ်ွရာကျွတ်ရာဆိုတာမရှိပါဘူး၊ ကျွန်တော်ကသိခဲ.မိပြီကိုး........... ကျွန်မသူ.Aတွက်စိတ်ညစ်သွားသည်။ သူ.ဘ၀ဟာတစ်ကယ်မလွယ်တာပါပဲလား။ ................ခင်ဗျားပြန်ချင်သွားပြီ................... မေးခွန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ...........ဟုတ်တယ်................... ကျွန်မမလိမ်ချင်ပါ။ ကွန်မတစ်ကယ်ပြန်ချင်နေပြီဖြစ်သည်။ ပထမပိုင်းတုန်းကတော.သူသည်ကျွန်မAားကူညီနိုင်လိမ်.မည်ဟုထင်ခဲ.သည်။ ယခုAခါသူသည်ကျွန်မAားမကူညီနိုင်မှန်းသေချာသွားပြီ။ သူ.ကူညီမှုသည်ကျွန်မAတွက်ကူညီရာရောက်မှာမဟုတ်ပါ။
Aသံတွေကိုသူကြားရသည်။ သူ.Aတွက်မကောင်းပါ။ ထိုAသံတွေAကြောင်းလူတွေAားပြန်ပြောပြသည်။ လူတွေAတွက်မကောင်းပါ။ ......ခင်ဗျားကျွန်တော်.ကိုဘာမှမမေးတော.ဘူးဆိုရင်ပြန်လေ............ သူကကျွန်မရှိရာသိုမမြင်ရသောမျက်လုံးများဖြင်.ငဲ.စောင်းလျက်ခွင်.ပေးသည်။ ကျွန်မထိုင်ရာမှAသာထလိုက်ပါသည်။ ............တစ်ခုလောက်တော.မေးချင်သေးတယ်................. သူကကျွန်မမတ်တတ်ရပ်လိုက်တာကိုသိနေသည်။ ထိုင်လျက်မှပင်ကျွန်မမျက်နှာရှိရာသို.မော.ကြည်.ပါသည်။ .........Aခုနောက်ပိုင်းမှာ၊Aင်းလေ.......AခုလိုAသံတွေကြားလာရပြီးတဲ.နောက်ပိုင်းမှာ ရှင်လေးစားခင်မင်ရတဲ.မိတ်ဆွေရယ်လို.ရှိနေသေးလား၊ ဘယ်နှယောက်ရှိသလဲ......... သူခပ်သာသာပြုံးသည်။ ......လူတွေဟာခင်ဗျားထင်သလောက်မဆိုးပါဘူး၊ နှစ်ယောက်လောက်တော.ရှိပါသေးတယ်... .....................ကျွန်မ၀မ်းသာပါတယ်.......................... ကျွန်မတစ်ကယ်ဝမ်းသာပါသည်။ သူ.Aတွက်လည်းဝမ်းသာသည်။ ကျွန်မAတွက်လည်းဝမ်းသာသည်။ ကမ္ဘာလောကကြီးAတွက်လည်းဝမ်းသာပါသည်။
ဂျူး ( ဗြူတီးမဂ္ဂဇင်း၊ ဇွန်လ ၂၀၀၂ )
A Than Phann Thu